IGoogle Chromecast Ultra ngoku iyafumaneka eSpain | Iindaba zeGajethi
Ingqungquthela yokugqibela apho uGoogle ebonise iPixel entsha kunye nePixel XL, iiterminal eziyilwe nguGoogle, nangona zenziwe ligqala leHTC, zikwasibonisa izixhobo ezintsha uGoogle afuna ukungena kuzo ngokupheleleyo emakhayeni ethu kwaye azame ukusenza ubomi Elula. Ukongeza kwiiPixels, UGoogle wazisa isizukulwana esitsha seChromecast, isixhobo esivumela ukuba sithumele umxholo kumgangatho we4k kwiTV yethu edibeneyo. Emva kweeveki zokulinda, abasebenzisi baseSpain abanomdla wokuyithenga ngoku banokwenza ngokuthe ngqo kwivenkile kaGoogle.
Kuzo zonke iimodeli eziqaliswe yinkampani ukuza kuthi ga ngoku le yeyokuqala exhasa umxholo kumgangatho we-4k, Umxholo wokuba unanamhla oku usenokubalwa kwiminwe yesandla, nangona kancinci kancinci nangakumbi abavelisi bebheja kule fomathi. Abantu abaninzi bacinga ukuba esi sixhobo asenzi ngqondo kwimarike, kuba ukuqala, udinga umabonwakude we-4k, ukuze ukwazi ukuwasebenzisa.
Olu hlobo lukamabonakude sele lusinika iintlobo ezahlukeneyo zonxibelelwano ukuze Ngokwenene esi sixhobo sinokusetyenziswa kwezo meko apho iTV ingahambelaniyo okanye isinika iingxaki zokuhambelana nesixhobo sethu. Esi sixhobo asihambelani kuphela nevidiyo ezikumgangatho we-4k, kodwa iyahambelana neevidiyo ezikwi-HDR, ifomathi yomxholo omtsha apho umahluko, ukukhanya kunye nombala ziphuculwe kakhulu.
Ngenxa yomgangatho womxholo kunye nendawo ekuyo, iChromecast Ultra inezibuko le-ethernet lokuyixhuma kwi-router ukuthatha ithuba lomda wendlela oluya kuthi xa usithelekisa nonxibelelwano olungenazingcingo. IChromecast Ultra inexabiso ngama-euro angama-79 ngokuhanjiswa simahla, kodwa kude kube ngeveki yokugqibela kaNovemba, abayi kuqala ukwenza ukuthunyelwa kokuqala kwesi sixhobo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » IGoogle Chromecast Ultra ngoku iyafumaneka eSpain
UApple uza kusebenza kwiiglasi zokwenyani ezingathandekiyo kwisitayile seGlasi kaGoogle